Niala Tsiny Ny Praiminisitr’i Tailandy Raha Nilaza Ny Fanaovana Bikinis Ho Mampiakatra Ny Tahan’ny Famonoana Mpizaha Tany · Global Voices teny Malagasy
Niala Tsiny Ny Praiminisitr'i Tailandy Raha Nilaza Ny Fanaovana Bikinis Ho Mampiakatra Ny Tahan'ny Famonoana Mpizaha Tany
Voadika ny 22 Oktobra 2014 4:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Català, English
Prayuth Chan-ocha Praiministr'i Tailandy faha 29 ary lehiben'ny tafika. Sary nalain'i Vichan Poti, Fizakàmanana @Demotix (9/4/2014)
Niala tsiny ny Praiminisitr'i Tailandy raha nilaza ny fomba fijeriny hoe mety hisy voina hanjo ireo mpizaha tany mitsidika ny fireneny raha manao bikinis izy ireo. Nandritra ny fanambarana nataony tamin'ireo mpanao tatitry ny fahitalavitra mikasika ny famonoana feno herisetra ireo Anglisy roa mpizaha tany teny amoron-dranomasina iray fanta-daza tany atsimon'i Tailandy no nilazan'i Praiminisitra Prayuth Chan-ocha io “hadalàna momba ny bikini” io. Taty aoriana dia nanazava i Prayuth fa tsy nieritreritra ny hanohina na iza na iza akory izy fa te-hitsinjo ireo mpizaha tany ireo.
Tamin'ny voalohandohan'ity herinandro ity, hita teny amoron-dranomasin'ny Nosikelin'i Koh Tao, any atsimon'i Tailandy ny fatin'i Hannah Witheridge (23 taona) sy David Miller (24 taona). Ny tatitra voaray voalohany dia manambara fa mety nisy namono ireo tanora teratany Britanika ireo. Efa eo am-panaovana fikarohana ny polisy amin'izao fotoana izao.
Mbola sahirana mandinika io tranganà famonoana olona io ny manampahefana ao Tailandy raha nanao io fanamarihana somary hafahafa io i Prayuth:
Misy olana foana eo amin'ny fandriampahaleman'ireo mpizaha tany. Mieritreritra izy ireo fa tsara tarehy ny firenentsika ary milamina ka afaka manao izay tiany atao izy ireo, afaka manao bikinis ary mivezivezy na aiza na aiza…Mety tsy hanana olana ve izy ireo raha manao bikinis… raha tsy hoe tsy tsara tarehy angaha?
Tsy dia nampiely ny zavatra nambaran'i Prayuth ny mpiasan'ny haino aman-jery tao Tailandy, kanefa dia nahatezitra sy nampitroatra ny vahoaka tany amin'ny firenena hafa maro izany, indrindra indrindra moa fa tany Angeletera. Maro ireo niampanga ny Lehiben'i Tailandy ho “nanameloka ireo sendran'io voina io” raha tokony namaha io heloka bevava io no nataony. Nitondra teny fialantsiny avy hatrany i Prayuth:
Manao azafady aminareo aho raha toa ka nahasorena anareo ny zavatra nolazaiko. Ny tiako hamafisina fotsiny dia ny hoe tsy manambany na manakiana na iza na iza aho akory. Fa te-hampitandrina azy ireo fotsiny mba ho mailomailo any amin'ny toerana sasantsasany ary amin'ny fotoana rehetra.
Ho fanampin'izany dia nilaza izy fa tratry ny tsindry henjana nandritry ilay tafatafa natao taminy:
Ekeko fa somary maherihery fiteny aho indraindray. Izany moa dia satria nahatsapa tsindry aho ary nalahelo azy ireo. Tena malahelo mafy azy ireo aho, na izy avy eto Tailandy na avy amin'ny firenena hafa. Tsy tiako hiverina intsony io trangan-javatra io.
Matahotra mafy ny hizaka andraikitra lehibe mikasika io loza nitranga io i Prayuth ka maika hanome tsiny ireo mpiasa nifindra monina ho nanao ireny heloka bevava ireny ary nampitandrina ny daholobe sy ny mpizaha tany mba ho mailomailo amin'ireo vahiny tsy manara-dalàna ireo:
Mbola manamafy ihany aho hoe firenena milamina i Tailandy, na dia misy olon-dratsy ihany aza aty. Noho izany, mila mailomailo izy ireo. Tsy mitovy mantsy ny fandriampahalemana any amin-dry zareo sy aty amintsika. Tsoriko fa mitaintaina ny amin'izy ireo aho.
Mila mifanampy isika eo amin'ny fikolokoloana [ny firenentsika] ka tsy hamela ireo olon-dratsy hifanerasera amintsika, toy ireo mpiasa avy any ivelany izay tsy manana taratasy mazava tsara ahafahany mijanona eto. Tsy tokony avelantsika hiasa ao anatin'izany fepetra izany izy ireo. Mampidi-doza izany ary mety hiteraka fahavoazana ho an'ny firenena.
Ny toerana nitrangan'io famonoana olona io dia iray amin'ireo nosikely fanta-daza indrindra ao Tailandy. Betsaka ireo olona no nizara sary maromaro tao amin'ny aterineto mampiseho io toerana io raha nahatsiaro ireo niharam-boina miisa roa ireo.
3 andro androany izao no nahitana fatinà teratany Anglisy 2 mpizaha tany teny amoron-dranomasin'i Tailandy. Nisy fifanjevoana tanteraka nandritry fikarohana nataon'ny polisy pic.twitter.com/pJ2JK3ZxXM
Nanome voninahitra ireo mpizaha tany nisy namono ny fianakavian'i David Miller sy Hannah Witheridge http://t.co/vijl2O05UY pic.twitter.com/W6zHGbKvHH
I Prayuth no lehiben'ny foloalindahy izay nanao fanonganam-panjakana tamin'ny volana May farany teo mba hitsaharan'ny ady sy fifandonana mahery vaika misy eo amin'ny antoko politika lehibe eo amin'ny firenena. Taorian'ny nananganana ny lalàm-panorenana vonjy maika, dia nanondro mpikambana ao amin'ny antenimiera mpanao lalàna ny foloalindahy, izay nametraka ihany koa an'i Prayuth ho Praiminisitra.
Ny lahatsoratr'olona iray avy any Bangkok dia nahatsiarotsiaro ny tsy fisian'ny horakoraky ny vahoaka tao Tailandy nohon'ny tsy fankasitrahana ny lahateny nataon'i Prayuth, tamin'ny filazàny fa ny fahanginan'ny mpitatitra vaovaon'ny haino aman-jery ao an-toerana dia tsy dia ahafahan'ny firenena “manana fotoana tsara hiadiana amin'ny kolontsaina manaiky ny fanolanana.”
Nanoratra ho an'ny Asian Correspondent i Saksith Saiyasombut tao anaty blaoginy, nanamarika izy fa “diso toerana io sangisangy zary tenany nataony io,” ary mangataka an'i Prayuth mba hitandrina bebe kokoa amin'ny lahateny ataony imasom-bahoaka amin'ny manaraka:
…lesona ho an'ny lehiben'ny foloalindahy ao aoriana ao izao trangan-javatra izao, toy izany koa ny lehiben'ny junta sy ny praiminisitra ary ankehitriny dia maro dia maro ireo vahoaka no hanara-maso azy mandritra ny fotoana anefany ny adidy aman'andraikiny ao amin'io toerany io ary mila mitandrina tsara izy eo amin'ny teny lazainy.
Nampanantena ny hanao fikarohana haingana dia haingana i Prayuth, hanomezana toky an'ireo mpizaha tany fa mbola milamina tsara i Tailandy ho azy ireo.
Raha ny marina dia niala tsiny ny Praiminisitra noho ny fihevereny halehiben'ny fiantraikan'io hadalàna be nataony io eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ekena fa ny tsy fahampian'ny tatitra nataon'ny mpiasan'ny haino aman-jery mikasika an'io lahatenin'i Prayuth io dia maneho mazava tsara ny tsy fisian'ny fahalalaham-pitenenan'ireo mpampita vaovaon'ny haino aman-jery ao Tailandy ankehitriny. Indrisy anefa fa toa maro ny mpampiasa aterineto no tsy sahy manakiana mivantana ny politika sy ny fomba fiasan'ireo manampahefan'ny tafika. Na koa noteren'ny herin'ny fiarahamonim-pirenena ao Tailandy angamba i Prayuth hanolotra teny fialantsiny tamin'ny hadalàna nataony. Raha marina io voalaza farany io, dia mety hisarika olom-pirenena maro hanohitra ny tetikady sasany mahabe adihevitra fampiasain'ny fitondram-panjakana tohanan'ny foloalindahy eo amin'ny firenena ity tranga ity.